Timaha jaridda ee Photoshop CC: Fudud, Deg Deg iyo Xirfad Leh | Abuurista khadka tooska ah
Timo jarista timaha marwalba waxay ahayd dhibaatooyin markii ay timaado isku dhafka astaamaheena halabuurkeena. Gaar ahaan markaan la shaqeyno muuqaal dhedig ah oo timo badan, tani waxay noqon kartaa caqabad. Fursadaha ayaa ah kuwo badan oo badan oo iyaga ka mid ahina waa kuwo hawlkar ah, laakiin talooyinkan fiidiyowga ah waxaan wajihi karnaa hawshan qaab fudud, hab fudud iyo muuqaal xirfadlayaal ah
Nidaamka jarista ee aan maanta ku tusi doono waa mid aad u dhakhso badan sidaa darteed wuxuu naga badbaadin karaa dhibaatada in ka badan hal munaasabad wuxuuna ka kooban yahay wejiyada soo socda:
Marka hore waxaan soo dhoofsan doonnaa sawirka aan ku shaqeyn doonno. Sawirkan waa inuu leeyahay qeexitaan weyn, sidaa darteed haddii aad ka shaqeyn doontid sawir adiga lagaa qaaday, waa inaad ka shaqeysaa dhinacyada sida nalka ama diiradda.
Waxaan dooranaa qalabka burushka ka dibna ikhtiyaar la hoos dhigo midabada hore iyo gadaasha, tan ayaa loo yaqaan «Ku tafatir qaabka maaskaro dhakhso leh» (waxaan ku dooran karnaa adigoo riixaya Q key). Hadda waxaan bilaabi doonnaa inaan dib u eegno tirada guud ee dabeecadeena, annaga oo aan hal tima ka tegin. Macno malahan hadii dib u eegida aysan sax aheyn, wey nagu filnaan doontaa inaan helno dhamaan waxyaabaha aan dooneyno inaan ku darno goyntayada.
Mar labaad riix qalabka «Ku tafatir qaabka maaskaro dhakhso leh» oo waxay noo abuuri doontaa xulasho.
Waxaan riixnaa Xulashada> Rogrog si loo xusho aagga na xiiseynaya.
Waxaan tagnaa aaladda Xidh oo aynu dhigno ikhtiyaarka "Edge refinement".
Daaqad ayaa ka soo muuqan doonta iyada oo taxane ah dejimaha, kuwani way kala duwanaan doonaan iyadoo ku xiran astaamaha sawirkeena. Laakiin waxaa jiri doona laba shey oo aan loo eegin sawirka aan isticmaaleyno, waa in la xusho. Qaabka muuqaalka waa inuu had iyo jeer ahaadaa mid madow oo sanduuqa "wasakhda geesaha" waa in la hawlgeliyaa.
Mar alla markii aan aasaasno xuduudaha ugu habboon, waa inaan bilowno ka gudub aagga cad oo dhan taas oo ku xeeran sawirka, isagoo xooga saaraya aagga timaha.
Waxaan ku celcelinaa hawsha inta jeer ee loo baahdo.
Waxaan soo dajineynaa sawir si aan ugu dhigno asalka asalka isla markaana aan ula jaanqaadno cabirka ugu habboon ee wax lagu beddelayo beddel (Ctrl + T) iyo qabashada badhanka Shift (far weyn) ku cadaadiyey inay u sameeyaan hab saami ah.
Waxaan ku abuureynaa saameyn isdhexgalka koromatikada aaladda Miiraha sawirka. (Sawir> Isku hagaajin> Shaandheyn sawir) oo waxaan ku dabaqnaa midka ugu fiican ee ku habboon hooska asalkayaga.
Waxaan ka shaqeyneynaa isdhexgalka iftiinka qalabka Qalooca (Sawirka> hagaajinta> Qalooca).
Caqabad ayaa la gaadhay!
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Photoshop » Timaha jarista ee Photoshop CC: Fudud, Deg Deg iyo Xirfad Leh
Carlos Cabanillas-Alva dijo
Waxaan u maleynayaa inaan sifiican ugu shaqeyn karo kanaalka ... ujeedadu waxay noqon laheyd cashar soo saarista timaha laakiin marka ay leedahay asal aad u adag oo leh midabyo badan.
Ku jawaab Carlos Cabanillas Alva
Aad u fiican, aad ayaad u mahadsan tahay.
Jawaab Julio Hurtado